Calice fucilato dai militanti dell'Isis per essere esposto nelle chiese spagnole | Io amo Gesù
Chalice gbara ndi otu ISIS agha gosiputa na ulo uka Spanish
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 29, 2020
Dịka akụkụ nke mbọ iji na-echeta ma na-ekpekwa ekpere maka Ndị Kraịst a na-akpagbu, ọtụtụ ụka dị na dayọsis nke Malaga, Spain na-egosipụta chalice nke steeti Islam gbagburu.
Onye ụka Katọlik ndị Siria chebere chalice a na Qaraqosh, na ndagwurugwu Nineve na Iraq. Ọ bụ diocese nke Malaga butere ya site na papal ọrụ ebere Aid na Church in Need (ACN) ka ọ gosipụta n'oge ndị mmadụ nyere maka Ndị Kraịst akpagburu.
"Ndị jihadists ji iko a mee ihe maka ebumnuche," ka Ana María Aldea, onye nnọchi anya ACN na Malaga kọwara. "Ihe ha na-echeghị bụ na a ga-enyeghachi ya onwe ya ma buruga ya n'ọtụtụ mba ụwa iji mee emume Mass n'ihu ya."
"Site na nke a, anyị chọrọ ime ka ihe dị adị nke anyị na-ahụ mgbe ụfọdụ na igwe onyonyo, mana anyị anaghị ama ihe anyị na-ahụ."
Ebumnuche igosi chalice n'oge uka, Aldea kwuru, bụ "ime ka ndị bi na Malaga hụ mmegide okpukpe ọtụtụ Ndị Kraịst na-ata taa, na nke dị kemgbe mmalite ụbọchị Churchka".
Dika diocese si kwuo, uka mbu na chalice a mere n'ubochi August 23 na ndi parish San Isidro Labrador na Santa María de la Cabeza n'obodo Cártama, chalice a ga-adi na diocese a rue September 14.
"Mgbe ị hụrụ challi a na mbata na ọpụpụ nke mgbọ, ọ bụ mgbe ahụ ka ị ghọtara mkpagbu ndị Kraịst na-ata ahụhụ n'ebe ndị a," Aldea kwuru.
Ala Ala Islam, nke a makwaara dị ka ISIS, wakporo ebe ugwu Iraq na 2014. Ndị agha ha gbasaa na Nineveh larịị, ebe obibi nke ọtụtụ obodo ndị Kraịst, na-amanye ihe karịrị 100.000 Ndị Kraịst ịgba ọsọ, ọkachasị Iraq Kurdistan agbata obi. maka nchekwa. N’oge ha nọ, ndị otu ISIS bibiri ọtụtụ ụlọ na ụlọ ahịa ndị Kraịst. E bibiri ụfọdụ chọọchị ma ọ bụ mebie nke ukwuu.
Na 2016, European Union, United States na Great Britain kwupụtara mwakpo ndị Alakụba Alakụba busoro ndị Kraịst na ndị obere okpukperechi ndị ọzọ mgbukpọ.
A meriri ISIS nke ukwuu ma chụpụ ya na mpaghara ya na Iraq, gụnyere Mosul na obodo Nineveh Plain, na 2017. Ọtụtụ ọnụọgụ ndị Kraịst alaghachila n’obodo ha mebiri emebi iji wughachi, mana ọtụtụ ka na-ala azụ laghachi n'ihi ọnọdụ nchekwa enweghị nsogbu